मञ्चनसँगै पुस्तकमा ‘बामियानका चिसा बुद्धहरू’ - HKNepal.com - First Nepali Internet Magazine Hong Kong | एचकेनेपाल डट कम
मञ्चनसँगै पुस्तकमा ‘बामियानका चिसा बुद्धहरू’
२५ माघ २०७१, आईतवार ००:०५
मञ्चमा मधुरो प्रकाश देखिन्छ। रातको दुई बज्न लागेको हुन्छ । एक मुर्तिकार भयानक सपना देखेर ब्युँझन्छ र एक्लै बोल्न थाल्छ, “अचेल किन मलाई चिसा र नमिठा सपनाहरुले बारम्बार लखेटिरहन्छ ? अहँ, म विचलित हुनु हुँदैन। मेरो काम मूर्तिमा ज्ञान खोप्नु हो। मूर्तिको वस्ती बसाउनु मेरो उद्देश्य हो। म प्राचीन जडताभित्र अचेल नयाँ ज्ञानको खोजी गर्दैछु। त्यो ज्ञान वामियानका चिसा बुद्धहरुको प्रस्थानविन्दुमा पनि हुन सक्छ। त्यो ज्ञान ताता मरुभूमिदेखि चिसा हिमालयसम्मको यात्रामा पनि हुन सक्छ। अनि त्यो ज्ञान कुनै मूर्तिकारले आफ्ना सिर्जनाको रक्षाका लागि भोगिरहेको अघोषित आजीवन कासावासभित्र पनि हुन सक्छ।”
राष्ट्रिय नाचघरमा मञ्चित ‘बामियानका चिसा बुद्धहरू’को नाट्यांश हो यो। नाट्यकर्मी कृष्ण शाह यात्रीद्वारा लिखित नाटक सङ्ग्रह ‘बामियानका चिसा बुद्धहरू’ मञ्चनसहित सार्बजनिक गरिएको छ। नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति सरुभक्त श्रेष्ठले यात्रीको नयाँ नाट्यकृतिको विमोचन गरेका हुन्। कार्यक्रममा सरुभक्तले भने, “नाटककार यात्री नाटक लेखन र निर्देशन दुवै विधामा सक्रिय र सफल स्रष्टा हुन्। उनका नाटकहरू विश्व–जनिन समस्याहरूमा केन्द्रित देखिन्छन्।”
कार्यक्रममा लोकार्पित पुस्तकमाथि बोल्दै डा. कुमार कोइरालाले भने, “यस कृतिका केही नाटकमा पूर्वीय मिथकको विनिर्माण गरिएको छ। विश्वका विभिन्न देशमा भएका मुर्तिमाथिका आक्रमण, विदेश पलायन जस्ता विषयमा केही नाटकहरू केन्द्रित छन्।”
‘बामियानका चिसा बुद्धहरू’ नाटकमा अशोक शिवाकोटीले एकल अभिनय गरेका थिए। नाट्यकृतिको भूमिकामा नाट्यविद् प्रा. डा. केशवप्रसाद उपाध्याय भन्छन्, “अढाइ दशकदेखि नाट्यकर्म र नाट्यलेखनमा निरन्तर लागिरहेका यात्री उत्तरप्रयोगधर्मी नाटककार हुन्। ‘बामियानका चिसा बुद्धहरू’ नाट्यसङ्ग्रह पनि नाट्यवस्तु र रङ्गमञ्चका सन्दर्भमा पहिलेका नाट्यकृतिहरु झैं उत्तरआधुनिक पृष्ठभूमिमा रचिएका उत्तरप्रयोगधर्मी नाट्यकलाका विकसित नाट्यरचनाहरुले भरिएको छ । यसले उनको नाट्ययात्रा रङ्गकलाका नयाँ–नयाँ द्वीपको खोजी गर्दै अघि बढिरहेको छ भन्ने देखाउँछ।”
कृष्ण शाह यात्रीको यो दशौं नाटकसङ्ग्रह तथा ३७ औं मौलिक कृति हो। यात्रीका नाटकहरू विश्वविद्यालयहरूको पाठ्यक्रममा समेत समावेश छन्। भरतमुनिको नाट्यशास्त्रमा विद्यावारिधी गरिरहेका यात्री भन्छन्, “पाँच वर्ष यता लेखिएका एवं मञ्चन भएका नाटकहरू यस कृतिमा परेका छन्। पहिलेका भन्दा यसमा केही नवीन प्रयोगहरू गरेको छु।”
प्रवासी सिङ्गिङ आईडलमा १० जना छनोट भए